UK oo Ogaatay Khatar amni oo ku soo wajahan Somalia ugana digtay muwaadiniinteeda -News and information about Somalia
Home Warkii UK oo Ogaatay Khatar amni oo ku soo wajahan Somalia ugana digtay...
UK oo Ogaatay Khatar amni oo ku soo wajahan Somalia ugana digtay muwaadiniinteeda
Dowladda Ingiriiska ayaa soo saartay digniin dhinaca amaanka ah oo ay u dirtay dadkeeda daneynaya in ay u safraan Soomaaliya.
Xafiiska arrimaha dibadda UK ayaa sheegay in Soomaaliya ay wali qatartahay islamarkaana afduubka iyo qaraxyada ay suuragal ka tahay gudaha Soomaaliya.
Muwaaddiniinta UK ee aan muhiimka u ahayn safarka Soomaaliya ayaa la sheegay isaga baxaan Soomaaliya kuwa muhiimka u ahna waxaa loo oggolyahay kaliya in ay tagaan Magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Dowladda UK.
Qoraalka ka soo baxay Dowladda UK ayaa lagu sheegay in kooxaha argagixisada ah ay qorsheynayaan weerarro argagixiso iyo afduub ay kula kacaan Ajaanibta ay ka midka yihiin dadka Britishka ah.
Sidoo kale Dowladda UK ayaa muwaaddiniinteeda ku wargelisay in adeegyada Qunsuliyadaha ka raadsadaan Kenya iyo Itoobiya maaddaama Safaaradda UK ee Muqdisho aysan bixin adeegyada Qunsuliyadaha.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo Oo Khudbad Ka Jeediyay Kulan Gaar Ah Oo QM Ay U Qorsheysay Somalia
Next articleXOG: Maxaadan Ogeyn oo ku soo kordhay Xaaladda Caafimaad ee Sheikh Mukhaar Roobow?